Semalt: Izihloko ze-WordPress kunye ne-Frameworks
Kuwo wonke umsebenzisi we-WordPress omtsha, umsebenzi wokukhetha umxholo omhle ngokuqhelekileyo uyinto eguqula umdlalo. Njengendlela eqhelekileyo yokusebenzisa imixholo, ukusebenzisa isihloko esitsha kwiwebhusayithi entsha ivakale. Amashishini amaninzi akhetha iplani ye-intanethi njengendlela entsha yokuthengisa. Kule meko, aba bantu banquma ukukhangela isihloko esihle se-WordPress. Kwezinye iimeko, abantu bakhetha ukusebenzisa izihloko ngenxa yezinto zophuhliso okanye kwimiba yoyilo. Umntu unako ukudibanisa zonke ezi ngxaki ngokukhetha nokusetyenziswa kwethempthi efanelekileyo ye-WordPress. Izihloko zilula ukusebenzisa nokuphucula. Ukongezelela, abasebenzisi banokongeza zabo iimpawu ngokufaka i-plugin ye-WordPress enokuyenza yonke i-website ibe ne-tweaks ekhethekileyo.
U-Ivan Konovalov, onguchwepheshe okhokelayo uSemalt , uqinisekisa ukuba zonke ii-WordPress themes ezingafani. Kukho imixholo eyahlukeneyo eyenzelwe iiwebhusayithi ezindidi ezahlukeneyo. Abasebenzisi abahlukeneyo bangafikelela kwimisebenzi eyahlukeneyo ngokusebenzisa imisebenzi ehlukeneyo. Kule candelo, abasebenzisi abatsha banenkinga enkulu ekukhetheni phakathi kwetheksthi ye-WordPress, okanye i-themePress theme. Kunzima ukugqiba isigqibo xa xa umntu efumana zonke iintlobo zeempendulo ekufuneni kwabo. Ngaphezulu, iwebhusayithi yakho ingaba yindawo esemgangathweni ikakhulu xa usebenzisa ama-child themes. Kwi-WordPress, kukho imiyalelo elula yokulandela umxholo wokukhetha injongo ethile..Kulula ukuqonda iinkcazo zabo ezichanekileyo kunye nemigomo kunye neziphakamiso zabo. Kule nqaku ye-SEO, kuya kuba neendlela ezahlukeneyo zokuqonda indlela ezi zinto zisebenza ngayo. Ngaphezu koko, kuya kuba neenkcazo kwiimeko nganye .
I-Framework WordPress Theme Framework: I-Framework Theme ye-WordPress inokuthi enye yezinto ezimbini:
Ukongezwa kumxholo wamanje onokubakhokelela ekuphuhlisweni komxholo othile okanye ikhowudi ye-standalone ye-starter theme engayongezwa kwenye umxholo ukwenza imisebenzi yayo eyahlukeneyo, okanye ukusetyenziswa njengenye itemplate.) U
Umxholo womntwana: Lo mxholo awuphelelanga, njengomxholo womzali. Kwimixholo yomntwana, kufuneka kube nomxholo womzali oqhuba ukusebenza kwewebhusayithi. Ukongezelela, yongeza kwi-customizations kunye ne-interfaces, engatshintshi xa uhlaziyo lomxholo womzali.
Ukuze ukwazi ukulawula ukuhlaziywa kwemixholo yakho, kufuneka ufunde indlela umxholo wakho womzali usebenza ngayo. Kwezinye iimeko, abalobi betihloko ze-WordPress baqhubeka bekhulula ukuhlaziywa kwezihloko zabo. Kule meko, ungadinga umxholo womntwana oya kusebenza kumbuyekezo. Khumbula ukuba xa ukuhlaziywa kwemixholo, iifayile ezihambelana nayo ziguquka. Unokufuna intsingiselo yomntwana onokwethenjelwa ukuze ukwazi ukugcina ezi tshintsho.
Izikhokelo zihluke ngokuhlaziywa komxholo. Nangona kunjalo, umgaqo-mxholo usebenza njengetemplate ye-intanethi yophuhliso. Isebenza ukuba ifakwe kwimixholo eyahlukeneyo kodwa ingasetyenziswanga njengomxholo ngokwawo. Umxholo womzali we-WordPress unokusebenza 'ngaphandle kwebhokisi,' kodwa umgaqo-mxholo unokufuna umxholo womntwana ube ngumsebenzi opheleleyo. Kuyakwazi ukusebenzisa i-plugin ye-WordPress kumxholo ogqityiweyo Source .